ER DR POKHREL को रचना ***ERC भित्रका ध्वस्त जीवनहरू*** |
Posted on जुलाई 20, 2015 by Padam Prasad Paudel	2 टिप्पणीहरु
***ERC भित्रका ध्वस्त जीवनहरू***
ईन्जिनियर बन्न आएका थियौ तिमी!
पाईलट चुरोटको पाईलट बन्यौ तिमी!!
आकाशमा उड्न चाहन्थ्यौ तर,
धुवा उडाउने बन्यौ तिमी!!!!
हुन त तिमीले डक्टर बन्ने चाहना उहिले नै छाडीसकेका थियौ ,
फेरी डक्टर बन्ने चाहना देखायौ तिमीले,
हातमा injection बोकेर medicine दिदै हिड्छौ तिमी!
medical council को certificate को स्वीकृति बिना डक्टर बन्दै छौ तिमी!!
मलाई लाग्छ तिमीले vector पढेनौ होला,
यात tanθ मा त सही angle निकालेनौ होला तिमी !
यदी तेसो नभएको भए wrong direction मा जान्थेनौ, होला तिमी!!
बाटो clear छदाछदै पनि त्रिशुलीमा खस्थेनौ होला तिमी !!!
मख्ख पर्लान बाबुआमा ईन्जिनियर पढ्न गएको छोरा डक्टर बन्दा ,
तर आफ्नै treatment गर्नुपर्ने डक्टर बन्यौ तिमी !
दुनिया बनाउने सपना बोक्यौ तर आफैलाई बिर्सने बन्यौ तिमी !!
यदी तिम्रो लाईफको achievement लाई time को respect मा derivative गर्ने हो भने zero अथवा tends to zero आउछ होला,
अगाडी बाटो नभएको Discontinous curve बन्यौ तिमी !!!!
मैले सुनेको थिए shortest distance between any two points is perpendicular distance between them,
तर धेरै घुमाउरो बाटो हिड्यौ तिमी!
एक बर्षमा पुग्ने ठाउमा तीन बर्ष लगायौ तिमी!!
यस्तो बहुमुल्य life लाई धेरै सस्तो बनायौ तिमी!!!!
हुन त तिमी charge हुन छाडेको discharging capacitor हौ,
हरेक time interval मा घट्दै जाने electric current बन्यौ तिमी!
चाहन्थ्यौ दुनियालाई उज्यालो छर्न तर0watt को bulb पनि नबाल्ने बन्यौ तिमी आधि जिउदो आधि मृत जीवन बोकेर हिड्यौ तिमी!!
→→creation of ER D R POKHREL
Previous post ← एक परदेशी साथीको पीडा
Next post अबको संबिधानमा यी कुराहरू पनि आओस →
2 thoughts on “ER DR POKHREL को रचना ***ERC भित्रका ध्वस्त जीवनहरू***”
Er D R Pokhrel भन्नुहुन्छ:
नोभेम्बर 25, 2015 मा 5:54 बिहान
Reblogged this on erdrpokhrel.
नोभेम्बर 25, 2015 मा 8:27 अपराह्न